"Kozma Minin" (umkhumbi) waqala nomlando wayo ngo-1963, lapho ayethunywe ukwenza GDR ukuze imikhumbi umgibeli zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. izinga German lihlolwe iminyaka engaphezu kwengu-50, futhi umkhumbi liyaqhubeka lijabulisa abagibeli ngoba ukwethembeka kwakho, ukuba induduzo service.
Umlando isakhiwo negama umkhumbi
Kozma Minin kwaba enkulu emlandweni ezikhathini Nezinkinga - nemantshi enkulu Nizhny Novgorod, owahlela futhi wahola abezempi kazwelonke ngokumelene ukungenela nabasePoland naseLithuania. Ukuze kuhlonishwe yakhe wawubizwa ngokuthi ezintathu anesitezi umkhumbi enhle, uyakwazi ukusingatha ebhodini kuze kube abagibeli 300. Nakuba sekudlule iminyaka eminingi ngemva yayakhiwe, umkhumbi "Kozma Minin" (ukubuyekezwa abagibeli uma ukhuluma nayo ngokuzibulala) sithinta imigqa nenhle, gumbi induduzo ezingeni imishini. Ngesivinini ngenhla 20 km / h futhi livumela izivakashi hhayi kuphela ukuphumula okuhle kumakhabheni ethokomele, kodwa futhi ujabulele indawo nemibono imizi yasendulo ngemuva.
Njengoba kulungiswe zokugcina "Kozma Minin" (umkhumbi) iye kabusha ngokuphelele futhi ifakwe electronics zanamuhla, okuhlungayo okusha ohlelweni kwemanti kanye nalesinye okuqapha adlulisa nese namathafa esikhathini sangempela.
Izinga noma iyiphi imoto umgibeli kuchazwe lula kumakhabheni yayo futhi izinga lenkonzo. "Kozma Minin" emkhunjini kanye namazinga ubudala wenduduzo, yokutholwa nekhulu lama-20, manje ihlangabezana zonke nemigomo lemisiwe ledzingeka ka kufika imikhumbi.
Linani selilonkhe lebantfu labange-103 umkhumbi apholile, ezinye zazo (sokunethezeka, isigaba "A" futhi "B") itholakala kwi emphemeni isikebhe. Ngamunye wabo has yokugezela sokugeza nendlu yangasese, umbhede owodwa esigabeni, i-TV, ifenisha upholstered, ikhabethe, itafula sigqoka nesiqandisi. Lezi izikebhe double kukhona-moya.
Kutholwe kwi emphemeni phakathi kumakhabheni olulodwa 1 kanye "A" ekilasini njengoba ikilasi 2 kabili futhi quadruple the "B" nekilasi lesibili. Zonke izikebhe ezidingekayo ukuze izingubo zokugqoka, bamanzi ashisayo nabandayo. On emphemeni efanayo kukhona onamakamelo amaningana aphakeme, kodwa ezincane futhi ngaphandle air conditioning.
emphemeni Main yokuhlala ezimbili double kumakhabheni ikilasi "A" futhi ezine Class 2 "B" ngamanzi ashisayo nabandayo kanye namakhabethe. Esikhathini aphansi emphemeni kumakhabheni ahlelwe kungekho Izinsiza, kodwa esikhundleni amawindi portholes khona. Kuye indawo kanye kuhlomisa apholile babe amanani ahlukene, okwenza umzila umkhumbi "Kozma Minin" atholakale abantu abasemazingeni ahlukahlukene yengcebo.
On emphemeni eyinhloko umkhumbi 2 zokudla ukuthi ukukhonza abagibeli izinguquko 2 at esingaba imizuzu 50. Ihlangene, ukudla kakade emananini izindleko izimvume, futhi imenyu ibhalisiwe, okuvumela abagibeli lokukhetha lokho ufisa ukuba.
Ibha ethokomele "Paradise Island" linikeza amakhasimende anhlobonhlobo iziphuzo kanye cocktail, kanye nethuba ukubukela ukubhukuda amabhange ngenxa amakhamera ngesikhathi sangempela.
Izivakashi ukudla ukuhlangana nabantu 25 ngisebenza ekhishini. Babuka ukuthi ukudla okumnandi futhi izitsha ezihlukahlukene sasikhazimula, agcwala izibuko futhi izibhebhe ezazilotshwe zikhishwa anesitayela. Impilo abagibeli kufanele ngomkhumbi odokotela ukusiza uma kwenzeka ukugula noma nginamalungelo usizo lokuqala eziphuthumayo. Ube umqondisi cruise, ilawulwe ngazo nezisebenzi 70-umuntu efanele ukwenza umsebenzi wawo, ngaphakathi schedule wokubuka.
Abenzi be-animation wahlanganyela ukuzijabulisa amaklayenti, okwenza uhambo hhayi kuphela umqondo jikelele we hambo kanye namathafa, kodwa futhi ngokulengiswa ebhodini. "Kozma Minin" - umkhumbi, lapho ungezwa umculo bukhoma, dance isigqi DJs nabaculi izinhlobo ezihlukahlukene ngenkathi ukujabulisa abadala Animators uhlele ukusebenza ngokukhethekile ezinganeni.
Iqembu 10 abaculi ngubani kuyo yonke indlela ukusiza izivakashi ukuba ngimthole ejabulayo umbono uhambo uhlala samaholide kakhulu. Kulabo abagibeli abajabulela engeyinhle kuphela udle, uphuze, uphumule, kodwa futhi ukuze kuqashwe impilo yabo, sauna liyoba yindawo sokuzilibazisa ngokwengqondo nangokomzimba. Souvenir esitolo, elise emkhunjini, ukuvumela wonke umuntu ukuthenga okuthile ku inkumbulo cruise noma yezandla ezithakazelisayo abathandekayo bazo.
umkhumbi "Kozma Minin" isheduli incike ukuvakasha abakhethiwe. Lokhu kungaba uhambo ngempelasonto izinsuku 3, futhi unga - cruise umnyuziki amasonto 3. Amadolobha, okuyinto wavakashela ngesikebhe, zahlukahlukene kakhulu, futhi kuba Nizhny Novgorod, futhi Tchaikovsky neKazan futhi Samara, futhi Yelabuga, futhi Astrachan, futhi Yaroslavl.
City, oqala umkhumbi Cruises "Kozma Minin" - Perm. Ngamunye wabo edolobheni wavakashela inomlando omude kanye izikhumbuzo.
Ngokwesibonelo, kukhulunywa ngaye okokuqala Samara kukhona 1367, lapho-ke nokho ukuba axazulule marina, okuyinto evame wavakashelwa kuphangwa yabo abayimizulane. Kuphela 1584 yasungulwa inqaba Samara njengoba ukuvikelwa kuphangwa nendawo izixhumanisi ahlaza boyars.
Namuhla Samara yidolobha ezinkulu ezimbonini, owalondoloza inkumbulo UStepan Razin futhi abathengisi Russian.
Enye abadumile, kodwa ngezindinganiso isiRashiya, futhi idolobha abasha - Perm. Yasungulwa kwisayithi ye Yegoshikha emzaneni lapho eduze engatholakala ezifakwa enkulu zethusi emkhandweni wensimbi. Imboni yokuqala lakhiwa khona, emhlabeni lapho edolobheni laqala ukukhula. Ithusi watholakala Umhleli Petru 1 Vasiliem Tatischevym e 1723, kusukela lapho kuvela umlando edolobheni.
Umkhumbi "Kozma Minin" ngokuvakashela imizi emikhulu ye-Russian, ngawo wonke isakhamuzi Russian kumele bafunde ukuze wazi umlando lokhokho, kusukela izincwadi nje kuphela.
Inyama e Chicken French
Iplanethi iPetononi. Ucwaningo lwesayensi lwamaplanethi wesistimu yelanga
Isignesha kulungiswa. Kanjani ukuba isayine amaphepha
Stevia ushukela esikhundleni. okokunandisa yemvelo
Pods for umshini ikhofi - kuyini? Coffee pods
Futha uwoyela: izici kudivayisi